Ny vokatry ny fatoriana be loatra | Sakafo Nutri
Mba hanana endrika, ilaina izany matory. Marina izany. Saingy tsy dia be loatra, satria ny torimaso be loatra dia mety hampidi-doza amin'ny fahasalamanao ihany koa. Ho an'ny mpikaroka sasany, ny fotoana lava be fatoriana dia misy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamana. Androany izahay dia mijanona amin'ity fandinihana ity izay manelingelina ny hevitra voaray ary toa mangalatra ilay toerana amin'ny olan'ny fifohana sigara, izay mazàna manome risika mihoatra ny 90% fiainana an-tany.
1 Ny maha-zava-dehibe ny tsingerin'ny torimaso mety
2 Ny vokatry ny fianarana
Ny maha-zava-dehibe ny tsingerin'ny torimaso mety
Azo antoka fa ny matory ± O misy famerenana amin'ny laoniny ny vatana. Na ahoana na ahoana, mandritra ny torimaso, dia mihetsika foana ny vatana. Ny fandinihana natao tamin'ny asan'ny mpikaroka aostralianina dia manasongadina ny fitambaran'ny fifohana sigara, ny fisotroan-toaka, ny tahan'ny fampihetseham-batana, ny tsy fahampian'ny torimaso be loatra.
Amin'izany fomba izany, ireo olona tafangona torimaso tafahoatra, tsy fisian'ny fanatanjahan-tena sy ny toerana fipetrahana, iharan-doza kokoa noho ny mponina mahazatra izy ireo. Ny toerana ipetrahana irery mandritra ny fotoana maharitra dia mampitombo ny risika fiainana an-tany. Raha atambatra amin'ny torimaso be loatra sy ny tsy fampiasana izy, dia mampitombo ny mety fahafatesan'ny 4,23.
Matory be loatra noho izany gazy mahafaty, rehefa ampiarahina amin'ireo anton-javatra hafa izay mampiseho fahadiovana eo amin'ny fiainana.
Ny vokatry ny fianarana
Raha ny marina, ity fandinihana ity dia manasongadina a tsy madio fidiovana manerantany. Eny tokoa, ny atleta izay misakafo salama dia tsy matory mihoatra ny 9 ora isan'andro. Fitondran-tena manerantany. Na izany aza, ny olona tsy dia be fanatanjahan-tena ary miroborobo amin'ny vokatra matavy dia hirona amin'izany matory betsaka kokoa.
Ankoatra izany, ny torimaso tafahoatra misy fiatraikany amin'ny olona tsy miasa izany. Ny fanajana ny ora fiasan'ny birao amin'ny ankapobeny dia midika ho torimaso latsaky ny 9 ora. Na izany na tsy izany dia tsara ny mijery tsara hanaraha-maso ny gadon'aina. Indraindray mifoha maraina dia mety tokony hataoSaingy amin'ny ankapobeny, ny fametrahana ny famantaranandro fanairana amin'ny 9 na 10 amin'ny faran'ny herinandro dia toa salama tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Ny vokatry ny fatoriana be loatra
Ny rano mananasy tsara indrindra hanombohana ny andro